Ms. hwiricheya anogona kumira, saka abviswa zita rake
A itsva Ms. hwiricheya Wisconsin akave akapfekedzwa korona mushure mekunge vatambi vemakwikwi vabvutisa wekutanga kuhwina zita paakaonekwa mu mufananidzo wepepanhau achisimuka.
Chiziviso che mutsva mukundi Chipiri chakauya pakati pekuratidzira pamusoro pechisarudzo chevamiriri vevamiriri svondo rapfuura kutora korona kuna Janeal Lee, mudzidzisi wepachikoro chepamusoro uye muscular dystrophy anorwara anoshandisa sikuta senzira yake huru yekutenderera asi achiti anogona kufamba kusvika pamamita makumi mashanu zuva rakanaka uye mira uchidzidzisa.
Munguva yefuror, mumhanyi-kumusoro akaramba kugamuchira korona kunze kwekuratidzira. Hanzvadzi yaLee, uyo anewo muscular dystrophy uye akatumidzwa kuti Ms. hwiricheya Minnesota. Ms. hwiricheya Minnesota., Akabuda mumakwikwi mudunhu iri. Uye murongi wechirongwa cheMinnesota chirongwa akasimuka kubva pabasa rake "kusimukira Janeal Lee."
"Ini handichanzwi kugadzikana kutsigira sangano iro panzvimbo pekushandira kugadzira shanduko yakanaka, rinosarudza kuenderera mberi nekufungidzira uye inokumbira vatori vechikamu kuti vavanze kugona kwavo pazere vanhu, "akadaro hanzvadzi, Sharon Chitubu wemakore makumi maviri nematanhatu weRochester, Minn.
Ms. hwiricheya Wisconsin. Ms. hwiricheya Wisconsin. Vakuru vakabvisa Lee korona mushure mekunge ane makore makumi matatu-30 akaratidzirwa akamira mukirasi yake mumufananidzo wakatakurwa mukuwedzera kune Iyo. Post-Crescent pepanhau yeAppleton.
Sangano rinoti vakwikwidzi vanofanirwa "kunyanya kuonekwa muvanhu." kushandisa zvavo mavhiripu or zvavo mavhiripu kana scooter. "
Uyo akazokunda akahwina wechipiri Kim Jerman weWaukesha, mumwe wevakadzi vashanu vakakwikwidza mukombe panguva yemakwikwi aNdira. Haana kukwanisa kusvikwa kuti ataure.
Pat O'Bryant, mutungamiri wepurogiramu yenyika, akasimbisa Jerman kuti atambira korona yeWisconsin asi akaramba mamwe mazwi.
Korona yakaenda kuna Jerman mushure mekutanga mumhanyi-up Michelle Kearney weWest Allis akaramba kuigamuchira.
"Ndiani ndokuti ndiani remara uye zvishoma remara Kupfuura mumwe munhu? "Kearney akaudza The Post-Crescent." Dai ndakabvuma, zvinoita sekunge ndanga ndichiti ndiri musarudzo nedare. "
Lee akati aifunga kuti danho resangano rakanga rakanaka asi aizoshandisa gakava iri kudzidzisa vamwe nezvehurema hwevanhu hungave nahwo.
"Zviripachena, zvingave zviri nani kana izvi zvisina kufanirwa kuitika kuti zvimutse kufarira kana kutaurirana nezvehurema," akadaro Lee.
Vakundi venyika Ms. hwiricheya makwikwi. Ms. hwiricheya makwikwi. enda kumakwikwi emunyika Chikunguru 19-24 muAlbany, NY
Verenga zvimwe pane nyaya